Mila averina ny fifampitokisana | NewsMada
Mila averina ny fifampitokisana
Par Taratra sur 26/11/2021
Efa manomboka miantraika mafy ary maharary amin’ny vahoaka eny ifotony amin’izao ny voka-dratsin’ny fidangan’ny vidim-piainana… tsy voafehy? Mila ho tsy voafehy koa mbamin’izay misy sy iainana andavanandro eny anivon’ny fiarahamonina amin’izany. Tsy inona fa ny tsy fandriampahalemana sy tsy filaminana, saika miseho amin’ny endriny samihafa: tsy hita hovisavisaina sy hotanisaina.
Manomboka amin’ny fanararaotana afitsoky ny sasany amin’ny fanondrotana vidin-javatra tsy amin’ny antony izay tsy filaminana izay, mandalo amin’ny karazana fisolokiana sy fanambakana. Eny, na hatramin’ny zava-mandinika tsy ampoizina aza. Tsy lazaina intsony hala-boty, ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo… Efa iainana andavanandro mandavantaona? Nefa tsy takona afenina fa toa mitombo izany tato ho ato.
Mety misy ho diso ny fijery sy fanombana? Na matavy filaza, na te hamendrofendro… Iaraha-mahita sy miaina izao fa sahirana ny maro amin’ny fiatrehana ny andavanandrom-piainana. Manampy trotraka ny haintany: hanao ahoana? Soa ihany, eo ny fandrotsahana orana tsy voajanahary hoe hatao manerana an’i Madagasikara. Arahaba soa, arahaba tsara… Mba ho feno ny fepetra hahazoana manatanteraka izany.
Saingy mandra-pitrangan’izay hitranga, efa tsy hita be ihany fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny tetiandrom-pamokarana ankapobeny… anahiana sy atahorana ny ampitso. Hanao ahoana? Izany rehetra izany mifaningotra sy mifamahofaho be ihany no mahazo ny vahoaka ifotony amin’izao: fahasahiranana, tsy fahazoana antoka izay atao sy hiseho na mety hianjady…Tsy misy afa-tsy lafiratsin-javatra no mibahan-toerana?
Ilaina averina ny fahatokisan-tena sy ny fifampitokisana amin’izay atrehina sy atao, na mafy sy sarotra toy inona aza. Tena iaraha-manana sy iaraha-mizaka ny fahasahiranana eo amin’ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga sy eo amin’ny vahoaka ifotony amin’izay tena laharam-pahamehana? Laharam-pahamehana mety miova sy azo ovaina, arakaraka ny fari-toe-javatra misy sy iainana.
ASIEF: efa miroso amin’ny fanomanana ny fifidianana 02/12/2021
Karate-Fihezama 2021: nandravarava ny Kokaju sy ny Akka 02/12/2021
Billard – “Blackball Time Limit Challenge”: lasan’i Ramesy ny lelavola 2 500 000 Ar 02/12/2021
Fiahiana ara-tsosialy taona 2022: voavolavola ny teti-pandaminana 02/12/2021
Fandraisana an-tanana isam-pokontany: mikirakira fitaovana 30 ny mpanentana ara-pahasalamana 02/12/2021